Zedekia - Wikipedia
I Zedekia na Sedekiasa dia mpanjakan' i Jodà nanapaka teo anelanelan' ny taona 597 sy 587 tal J.K. Izy no mpanjaka farany tao amin' ny Fanjakan' i Jodà. Niara-belona taminy ny mpaminany Jeremia sy Zakaria. Tamin' ny androny no nandravàna an' i Jerosalema sy ny Tempoly ary nanaovana sesitany ny mponina tao Jodà. Zanaky ny mpanjaka Jôsia (na Jôsiasa) tamin' i Hamôtala (zanaka vavin' i Jeremia avy any Libna) i Zedekia sady zandrin' i Eliakima (ny mpanjaka Jôiakima na Jôakima) sy Jôahaza (2Mpaj. 23.31; Jer. 24.17-18). Resahina ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka sy ny Bokin' i Jeremia ny tantaran' ny fanjakan' i Zedekia.
2 Ny loza nahazo an' i Zedekia
I Matania (hebreo: Mattanyahu; grika: Mathanias) no anarany talohan'ny naha mpanjaka azy. Ao amin'ny Tanakh (Baiboly jiosy amin'ny teny hebreo) dia atao hoe צִדְקִיָּהוּ / Şidhqiyyâhû (raha tsorina: Tsidkiyâhû) izy. Ao amin'ny Septoajinta (Baiboly jiosy amin'ny teny grika) kosa izy dia atao hoe ζεδεκιας / Zedekias fa ao amin'ny Volgata (Baiboly amin'ny teny latina) izy dia atao hoe Sedecias.
Ny loza nahazo an' i ZedekiaHanova
Novonoina teo imason' i Zedekia ireo zanany, nataon' i Gustave Doré, taona 1866.
Natoky ny fanampian' i Egipta i Zedekia ka nikomy tamin' ny mpanjakan' i Babilôna (i Nebokadnetsara). Nitondra tafika ka nanao fahirano an' i Jerosalema ny Babilôniana nandritra ny roa taona ka naharodana ny tanàna tamin' ny taona 587 tal .J.K. Voasambotra i Zedekia (2Mpaj. 25.6, Jer. 52.9) ary novonoina teo imasony ireo zanany lahy (2Mpaj. 25.7; Jer. 52.10) alohan' ny nanapotsirana ny masony (2Mpaj. 25.7; Jer. 52.11).
Tsy novonoina ireo zanany vavy fa nampitondraina ilay governora jodaita notendren' i Nebokadnetsara atao hoe Gedalia (Jer. 41.10) nefa novonoin' i Ismaela izay isan' ny fianakavian' ny mpanjaka i Gedalia (2Mpaj. 25.25; Jer. 41.1) tao Mizpa (na Mitspa) (2Mpaj. 25.25; Jer. 41.2) sady nosamboriny ireo zanaka vavin' i Zedekia ka nentiny tany amin' ny tanin' ny Amôna (Jer. 41.10). Nanenjika an' i Ismaela i Jôhanana ka nahatratra azy tao Gibeôna (Jer. 41.12) sady nanafaka ny zanaka vavin' i Zedekia, dia nitondra azy ireo tao amin' ny toeram-piafenana tao akaikin' i Betela (Jer. 41.17) avy eo nitondra azy ireo ho any amin' ireo Jiosy monina any Egipta (Jer. 43.7).
Nodorana ny Tempolin' i Jerosalema sy ny lapan' ny mpanjaka ary nobaboina ny fananana tao aminy sady narodana ny mandan' ny tanàna. Natao sesitany tany Babilôna i Zedekia niaraka amin' ny mponin' i Jerosalema izay tsy afa-nandositra. Maty am-ponja tany Babilôna i Zedekia (Jer. 52,11).
↑ 1,0 et 1,1 Histoire visuelle de la Bible, National Geographic, Les Nouveaux Essentiels, octobre 2013, 512 p.(ISBN 9782822900331)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zedekia&oldid=1042048"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 12:26
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 12:26 ity pejy ity.